ယခုခေတ်မှာမြင်ရခဲတဲ့ရန်ပွဲ - JAPO Japanese News
ဟူး 18 Dec 2019, 15:49 ညနေ
တိုကျိုမြို့၊ အဒစ်ချီကူရပ်ကွက်တွင် အသက်(၁၆) နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးနှစ်ဦးဟာ မြစ်ကမ်းပါးနားမှာ စကားများရန်ဖြစ်ပြီး ရဲတိုင်ကြားခြင်းခံရကာ တိုင်စာပို့ခံခဲ့ရပါတယ်။
မြို့တော်ရဲဌာရဲ့ ကြေညာချက်အရ အဲ့ဒီယောကျ်ားလေးနှစ်‌ယောက်က ကျောင်းမတူတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသားများဖြစ်ကြပြီး ဒီထဲက ကောင်လေးတစ်ယောက်ကဟာ ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့ချိန်းတွေ့တာကို နောက်တစ်ယောက်က မိုက်မဲတာဆိုပြီး ပြောလိုက်တဲ့အချက်ကနေရန်ဖြစ်ဖို့အစပျိုးကာ Line မှ မက်ဆေ့ချ့်ဖြင့် စိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။
・Give Up လို့ပြောလိုက်ရင်ပွဲပြီးမယ်
・ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပါက ရဲအားတိုင်ကြားခြင်းမပြုရ လို့ဆိုတဲ့ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းနှင့် ရန်ဖြစ်ခဲ့ကြပုံပေါ်သည်။
ဒါပေမယ့် လမ်းသွားလမ်းလာတစ်ဦးက ဒီရန်ပွဲကိုမြင်လိုက်တာကြောင့် ရဲစခန်းသို့အ‌ကြောင်းကြားခဲ့ကာ ဖြစ်စဥ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပီး ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေဖြစ်မလာခင်မှာပဲ ရန်ပွဲဟာပီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်မိတ်ဆွေများ ရှိပုံရသော်လည်း ပါ၀င်ပတ်သတ်ခြင်းမပြုဖို့က စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထဲမှာ အပါအ၀င်ပါဖြစ်ပြီး ဒါဟာ ဆာမူရိုင်းရဲ့ စစ်တိုက်ပုံစစ်တိုက်နည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံမှာက တစ်‌ယောက်ချင်းယှဥ်တိုက်ပွဲဆိုတာ ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်သော အမှုဖြစ်သောကြောင့် နှစ်ဦးစလုံးသဘောတူချက်တွေနဲ့ ရန်ပွဲဖြစ်ရင်တောင် ရာဇ၀ တ်မှုကျူးလွန်တာပါပဲ။
အခုတလော ရေပန်းစားနေတဲ့ မှုခင်းတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် လူတစ်ဦး၏တိုက်ခိုက်မှု၊ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများအား ဆူပူနှိမ်နှင်းမှုနှင့် လက်နက်များအသုံးပြုကာတိုက်ခိုက်မှုတို့မှာ အရေအတွက်များပြားလာပုံရပါတယ်။ ဒီလိုမှုခင်းတွေကြားထဲတွင် ယခုတစ်ခေါက် မှုခင်းသတင်းကို ဖတ်လိုက်ရပြီး ပြုံးလိုက်မိတာက ကျွန်တော်တစ်‌ယောက်တည်းမဟုတ်တာသေချာပါတယ်။
Showaခေတ် (1926-1989) မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ ရန်ဖြစ်တာမကောင်းဘူးဆိုပေမယ့် ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ကတော့ အဲလိုလည်း မဟုတ်သေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်။အကြီးအကျယ်ဒဏ်ရာမရခဲ့လို့ ဝမ်းသာမိတယ်၊ ရန်ဖြစ်တာမကောင်းဘူး၊ ဒါပေမယ့် အမျိုးသားတွေကြားမှာတစ်‌ယောက်ချင်းယှဥ်တိုက်တဲ့ရန်ပွဲတွေရှိလား ဆိုတာကတော့…???
အချိန်တွေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ တစ်‌ယောက်ချင်းယှဥ်တိုက်ပွဲဆိုသည့်အရာမှာ လွန်လေပြီးသော အတိတ်ကခံစားချက်လေးများအဖြစ်တည်ရှိနေပြီး Anime နှင့် Manga များမှာလည်း တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာပါတယ်။
ကျွန်တော်ကလေးဘဝတုန်းကဖတ်ခဲ့ရတဲ့ Manga တွေကတစ်‌ယောက်ချင်းယှဥ်တိုက်ပွဲ လို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရန်ဖြစ်တဲ့ရန်ပွဲတွေဖြစ်ပီးရန်ဖြစ်သည့်အခါတွင်လည်း
“ Kinnikuman”,“ North Star of Fist” အစရှိသော Manga များကဲ့သို့
“အမျိုးသားများ၏ရန်ပွဲအကြားမည်သူမျှမပါကြေး” ဆိုတဲ့ ‌ထိုအချိန်တုန်းကပြီးပြည့်စုံသော manga ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအောက်ကပုံရဲ့သရုပ်ဖော်ဆောင်မှုဟာ Friendship ဟူသော “ခင်မင်မှု” ကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ပွဲမတိုင်မှီတစ်ဖက်လူဟာ ရန်သူဖြစ်သော်လည်း ရန်ပွဲများအကြားမှ နောက်ဆုံး မိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်သွားနိုင်ကြတယ်လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။ Manga တွင် အားကြီးသောရန်သူ “強敵”ကို သူငယ်ချင်း “友(とも)” လို့ဖတ်ပါတယ်။
သေချာပေါက် ဒီစာဟာ ဂျပန်ဘာသာအနေနှင့်တော့မဟုတ်ပေမယ့် Manga တွင်ဖတ်သော ဖတ်နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ဒီလိုမျိုးကာတွန်း Manga တွေဟာ‌ရေပန်းမစား‌တော့ပဲ အုပ်စုလိုက် အဖွဲ့လိုက် တိုက်ခိုက်တဲ့ရန်ပွဲတွေကသာ တိုးပွားလာပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း ရန်ပွဲများရဲ့ ပုံစံများမှာလည်း သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားတာလို့ထင်ပါတယ်။
ပိုကီမွန် ထဲကလို မိမိကိုယ်တိုင် တစ်ခါမှမဖြစ်ဖူးတဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုပါ။
Manga ရုပ်ပြတွေ၊ anime တွေ၊ ဂိမ်းတွေအတွက်မကောင်းဘူးဆိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ရန်ပွဲတိုက်ခိုက်ဖို့ စဉ်းစားတွေးခေါ် ပုံက ကလေးတွေအတွက်ပြောင်းလဲနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခုကျောင်းသားလေးနှစ်‌ယောက်ရဲ့ ရန်ပွဲက ကျွန်တော့်အတွက်တော့ Showa ခေတ်ကိုသတိရစေတဲ့ အံ့အားသင့်စရာ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သင်ဟာ လက်နက်သုံးပြီး ရိုက်နှက်တဲ့သူဆိုရင် ရိုက်နှက်ခံရသူရဲ့ခံစားချက်ကို သင်မသိနိုင်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်နာနာ ဓား၊လက်နက်တို့တော့ မသုံးဘူး။
ငါ့ရန်သူသေတဲ့အထိငါတိုက်မယ်။ အခုလို စဉ်းစားတွေးခေါ် ပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရဲရင့်မှု ဆိုတဲ့ အရာကိုလည်း ခံစားသိရှိစေပါတယ်။
ရန်ဖြစ်တာကိုအား‌ပေးတာတော့မဟုတ်‌ပါဘူး။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတော့ တွေ့ချင်ခဲ့မိပါတယ်။
Anatahan ကျွန်းရဲ့ ဘုရင်မဖြစ်သွားတဲ့ကောင်မလေး
ရက်စက်လွန်းတဲ့ Ninja လက်နက်များ
၂၈ ခုနှစ်တိုင်တိုင် တစ်ဦးတည်း တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ဂျပန်
Rugby ဆော့တဲ့ လူသန်မာကြီးတွေဖြစ်ပေမဲ့ စိတ်ဓါတ်ကတော့ လေးစားစရာ!!!
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ လမ်းထဲကို သင်သွားနိုင်ပါ့မလား ?
၁ မီတာလောက်ဆူနာမီကို ပေါ့သေးသေးမမှတ်လိုက်နဲ့နော်…